जब विमानस्थलमा भेटिइन् पर्यटन परी (रोबोट) « Pokharaaaja
प्रकाशित मिति : 20 February, 2020 5:00 pm
नमस्कार ! ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ’ । झट्ट सुन्दा यो कुनै कुशल सञ्चालकले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम झैँ लाग्छ । त्यस्तो झल्को पनि दिन्छ । यथार्थमा भने यो कुनै कुशल सञ्चालक नभएर मानवरहित यन्त्र अर्थात् रोबोट थियो ।
साँच्चिकै उद्घोषिकाले जस्तै गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको त्यो दृश्यले विमानस्थलमा उपस्थित सबैको ध्यान खिच्यो । सेलीब्रेटी रोबोटसँग फोटो र सेल्फी खिच्नेको भिडै लाग्यो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पनि दुई रोबोट पर्यटन परीसँग तस्बिर लिन अघि सर्नुभयो । उक्त क्षणको त्यहाँ उपस्थित फोटो पत्रकारले तस्बिर कैद गर्ने होडबाजी चल्यो ।
विदेशी पर्यटक तथा स्वदेशी जो कोहीलाई विमानस्थलको आवश्यक सेवा र नेपालको पर्यटकीय गन्तव्यबारे भरपुर जानकारी दिन रोबोटले भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले आज एक कार्यक्रमबीच विमानस्थलमा दुई रोबोटको सेवा शुभारम्भ गर्नुभयो ।
अन्य विकसित मुलुकको तुलनामा नेपालको प्रविधिले फड्को मारेको सन्देश विश्वलाई प्रवाह गर्न यो सेवाले सहयोग पुग्ने नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालयका उपसचिव राजन पौडेल बताउनुहुन्छ । उहाँले नेपाल भ्रमण वर्षलाई सहयोग गर्ने तथा सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणालाई साकार पार्दै नेपाल प्रविधिलाई जोड दिन चाहन्छ भन्ने सन्देश दिन सहयोगसिद्ध हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
पाइला टेक्नोलोजीका संस्थापक कार्यकारी निर्देशक आयुश कँसजुले विमानस्थलमा पुग्ने पर्यटक तथा सर्वसाधारणलाई आवश्यक पर्यटकीय सूचनासाथै विमानस्थलका विविध सेवाको जानकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले रोबोट स्थापना गरिएको बताउनुभयो ।
नेपालको अध्यागमन प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन विमानस्थलमा अध्यागमन विभागबाट विकास गरिएको नेपालको ‘पोर्ट’ नामक अध्यागमन सूचना प्रणाली एवं भौतिक पूर्वाधारसहितको अत्याधुनिक अध्यागमन सेवाले विमानस्थलको आधुनिक प्रणालीको सुधारलाई झल्काउँछ । उक्त सेवाको गत माघ १३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिकका रुपमा रुपान्तरण गर्ने काम पनि धमाधम भइरहेको छ । यसले विमानस्थलको स्वरुपलाई नयाँपन दिएको छ । विमानस्थलको सेवालाई आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने काम निरन्तर भइरहेको विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीले बताउनुभयो ।
पर्यटनमन्त्री भट्टराईले विमानस्थलको सेवालाई आधुनिक र विश्वस्तरीय बनाउन क्रमशः सेवा विस्तारका क्रममा रोबोट सेवा एक महत्वपूर्ण प्रयोग भएको उल्लेख गर्नुभयो । “अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझै आधुनिक र प्रविधियुक्त हुँदैछ । यात्रुलाई प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाको हिसाबले सहयोग बढ्दै गएको छ त्यसको पछिल्लो उदाहरण रोबोट सेवा शुभारम्भ हो”, उहाँले भन्नुभयो । अहिले परीक्षणका रुपमा शुरु गरिएको यो सेवालाई उपयुक्त ठानिएमा अन्य विमानस्थलमा स्थापित गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले अझै स्थानको अभाव र कतिपय प्राविधिक समस्याका कारण विमानस्थलले प्रभावकारी सुविधा दिन नसकेको भन्दै छिट्टै सञ्चालनमा आउने गरी निर्माण भइरहेका विमानस्थलको सेवालाई चुस्त र दुरुस्त पारिने उल्लेख गर्नुभयो । रोबोटले कसरी काम गर्छ भनेर डेमो प्रदर्शनीसमेत गरिएको थियो ।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले
हेडलाइन बंगाएर बदमासी भयाे,कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हेडलाइन बंगाएर बदमासी गरेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् ।